DHACDOYINKA – Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
DHACDOYINKA | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
MUSAL SALKA BADBAADO Part 1 HD Waa Musal Sal Somali ah oo Cusub, waxaana soo diyaariyay Tvga Universal, waan ugaga mahadcelinaynaa waxaana loogu talagalay Bishan Barakeysan ee Ramadaan,
SHEEKO CAJIIB :- XAASAS FEDERAAL AH Nin deggan Muqdisho oo afar xaas leh ayey la soo deris mushkilad dhanka qoysaskiisa ah, kaddib markii ay xaasaskii isku buuqeen, gartoodiina la xallin waayey. markii ay arrintii daba dheeraatay, oo xitaa ay saameysay carruurtiisii ayuu la tashaday gabar ka mid ah gabdhihiisa oo ku tuhmayey in ay caqli u saaxiib tahay. Gabadhii waxaa uu weydiiyey maandhaay dhibkan waa uu soo ...
Maxaa Xabsiga loogu hayaa Abwaan Gama’diid.? Abwaan C/waaxid Cali Gamadiid wuxu kamid yahay Abwaanada somaliyeed kuwooda ugu magaca dheer, Wuxu dhowr mar xoriyadiisa ku waayey Gabayo uu wax ugu bidhaaminayey dadkiisa! Abwaanku wuxu horay Loogu xiray Puntland, Haatana wuxu weli Xabsi ugu jiraa Somaliland isagoo lagu eedaynayo gabaygii uu ka tiriyey dhacdadii France. (Maxaad Muslimiin ugu Hiilineysaa?) Ma joogo dal gaalo, ma ihi faransiis, ku darsoo dadka ixiray ...